निषेधाज्ञाका कारण बढेका कुखुरा खोरमै थन्किए, किसान मारमा
जेठ २०, बागलुङ । बागलुङ नगरपालिका–३ का कुखुरापालक किसान देवेन्द्र पुनकामा रहेका ३०० ब्रोइलर कुखुराले ६० दिन नाघे । तौल बढेर चार किलो बढीका भइसके । पहिला ४०–४५ दिनमै कुखुरा बेच्नुपर्थ्यो । अहिले कुखुरा खोरमै थन्किएका छन् ।
महँगो दाना खुवाएर पाल्नुपर्ने स्थिति छ । पुनको खर्च बढेको बढ्यै छ । निषेधाज्ञाका कारण कुखुरा बिकेका छैनन् । बजार, व्यवसाय ठप्प छ । मासुको खपत घटेको छ । यही बेला मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ । ‘ज्यूँदो कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो रू. ३२० बाट रू. २३० मा झरेको छ’, पुनले भने ।
निषेधाज्ञाअघि रू. ५०० बढी पुगेको मासुको भाउ पनि घटेर अहिले ४४० भएको छ । ‘कुखुरापालनमा खर्च धेरै छ, यसपालि लागत पनि नउठ्ने भयो, किसानलाई उल्टो घाटा छ’, पुनले भने, ‘कहिले स्थिति सहज हुन्छ भन्ने पनि कुनै टुंगो छैन ।’ मासु धेरै खपत हुने होटल, रेष्टराँ नै अहिले बन्द छन् ।
फाटफुट्टरूपमा घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र मासुको विक्री भइरहेको छ । कतिपय व्यवसायी मासु पसल पनि बन्द गरेर बसेका छन् । खाद्यान्न, तरकारी, माछा, मासुलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री खरीदका लागि बिहान १०:०० बजेसम्म मात्र बजार खुल्छ ।
कुखुरापालक किसानले गरेको बीमा पनि ५० दिनसम्मका कुखुरामा मात्र लागू हुन्छ । पचास दिन कटेका कुखुरा कुनै रोगव्याधिले मरे पनि किसानले बीमा रकम पाउँदैनन् । पोल्ट्री व्यवसायी संघ बागलुङका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठले यही बेला रानीखेत रोगले पनि कुखुरापालक किसानलाई सताएको बताए ।
‘तीन/चार जना किसानको त खोर नै रित्तियो, एकातिर निषेधाज्ञाले कुखुरा नै उठेको छैन, अर्कातिर रोगले किसानलाई अप्ठेरो परेको छ’, उनले भने । विक्रीका लागि तयार भएका कुखुरा ठूलो मात्रामा किसानकामा रोकिएर बसेको श्रेष्ठले बताए ।
रू. १३५ मा चल्ला किनेका किसानलाई ज्यूँदो कुखुरा थोकमा प्रतिकिलो रू. २०० मा बेच्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनको भनाइ छ । दाना पनि महँगिएपछि किसानलाई थप मर्का परेको छ । रू. तीन हजार ४०० पर्ने दाना अहिले तीन हजार ६०० बढीमा किन्नुपर्छ । कुखुरा विक्री नभई थन्किए किसानको लागत दैनिक बढ्दै जाने हुन्छ । समयमा बेच्न नसक्दा कुखुरापालनको नियमित चक्रमा असर पुग्छ ।
संघका अनुसार सहज समयमा सातामा २० हजार जति कुखुराका चल्ला बागलुङ भित्रन्छन् । अहिले चल्ला आयात भएका छैनन् । जिल्लामा झण्डै २०० व्यावसायिक कुखुरापालक किसान छन् । पछिल्लो समय ब्रोइलरसँगै स्थानीय जातका कुखुराको पनि व्यावसायिकपालन बढ्दो छ । रासस
अर्नाकोट विमानस्थलको डीपीआर तयार[२०७८ असार, ४]
मध्यपहाडी लोकमार्ग चार दिनपछि सञ्चालन[२०७८ असार, ४]
पर्यटक तान्न संग्रहालय र दृश्यावलोकन स्तम्भ निर्माण[२०७८ असार, ४]
मकै छाडेर सूर्यमुखी खेतीमा पाल्पाका कृषकको आकर्षण [२०७८ असार, ३]
बौदीखोलामा आएको बाढीले निर्माणाधीन पुल बगायो[२०७८ असार, ३]